Wararka Maanta: Axad, Aug 5 , 2012-Dood-cilmiyeed ku saabsan mideynta Dhallinyarada oo lagu qabtay Magaalada Balad- weyne ee Xarunta Goblka Hiiraan
Dood-cilmiyeed ku saabsan mideynta Dhallinyarada oo lagu qabtay Magaalada Balad- weyne ee Xarunta Goblka Hiiraan Axad, Ogoosto 05, 2012 (HOL) — Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay lagu qabtay dood-cilmiyeed ay soo qabanqaabisay hay'adda wadahadalka bulshada ee CCD isla markaana ay kasoo qeyb-galeen qeybaha kala duwan ee dhallinyarada, culummaa'udiin, waxgarad iyo haweenka deggen degmadaas iyo degaanada ku dhow-dhow.
Furitaanka doodda oo halku dhiggeedu ahaa: "Sidee lagu mideyn karaa dhallinyarada deggen magaalada Baladweyne?" ayaa waxaa ka qaygalay barayaal iyo ururrada bulshada rayidka ah ee Baladweyne, kuwaasoo khudbado kala duwan u jeediyay in ka badan 150-dhallinyarada ah oo doodda goobjoog ka ahaa.
Xamdi Ismaaciil Maxamuud oo ka socotay haweenka dhallinyarada Baladweyne ayaa khudbad ay halkaasi ka jeedisay waxay si gaar ah uga hadashay halgamayaashii dalka soo maray taariikhdana baal-dahab ah ka galay ee iyagu intooda badan ku dhashay amaba ku noolaa magaalada Baladweyne, waxayna caddeysay in haddii ay dhallinyarada maanta dadaal muujiyaan ay la mid noqon karaan hoggaamiyeyaashaas.
Maxamed Axmed Faarax oo ka mid ah dhallinyarada Baladweyne ayaa khudbad uu ka jeediyay furitaanka dood-cilmiyeedka wuxuu si qoto dheer uga hadlay qaabka lagu mideyn karo dhallinyarada gobolka Hiiraan, isagoo caddeeyay inay lagama maamrmaan tahay midnimada dhallinyarada taasoo uu sheegay inay ku gaari karaan horumar.
Sheekh C/raxmaan Sheekh Cabdulle oo ka mid ah culumada Baladweyne ayaa isna khudbad dhinacyo badan oo uu halkaasi ka jeediyay wuxuu dhallinyarada gobolka Hiiraan ku boorriyay inay marka hore qabsadaan xarigga Alle, isla markaana ay ku walaaloobaan gobolka ay deggen yihiin, isla markaana meel kasta oo ay joogaan ay isku baheystaan inay yihiin dad reer Hiiraan ah oo aanay adeegsan qabiil iyo wixii la mid ah ee kala geynaya bulshada gobolka.
Dhinaca kale, Nuuraani Cadaawe oo halkaasi khudbad ka jeediyay wuxuu si gaar ah ula dardaarmay dhallinyarada degan magaalada Baladweyne, wuxuuna sheegay inay ka fogaadaan muqaadaraadka sida xashiishka, sigaarka, jaadka IWM, taasoo uu ku sheegay inuu dib u dhac ku keenayo mustaqbalkooda.
Gabagabadii doodda ayaa dhallinyarada kasoo qayb-gashay waxay u riyaaqeen munaasabadaha noocaan oo kale ah, wuxuuna ka codsaday Nuuraani Cadaawe Hay'adda CCD inay kordhiso doodaha dhexmara dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada Baladweyne si ay uga tashadaan aayahooda.
Axad, Ogoosto 05, 2012 (HOL) — Xoogagga Al-shabaab ayaa xalay weeraray laba saldhig oo ay ciidamada dowladda KMG ah ku lahaayeen degmada Afgooye, iyadoo la sheegay inay dhowr qof oo ka tirsan labada dhinac ku dhinteen dagaalkaas. Maareeyihii Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo xalay la dilay iyo Dowladda KMG ah oo dilkiisa ku eedeysay Al-shabaab 8/5/2012 3:06 AM EST